I-china i-3d egobileyo yocingo oluthambileyo locingo, ucingo oluthandwayo lwe-mesh ucingo njengocingo lokhuseleko lokuhlala eMntla Melika kunye noMthengisi | Pro olubiyele
Iphaneli yocingo lwesinyithi esenziwe ngesinyithi se-appli yoyilo ...
I-PRO.FENCE ivelisa kwaye isasaze uluhlu lwefowuni yocingo lokudibanisa ukuhlangabezana nezicelo ezininzi. Olu cingo lwe-3D lwalugobileyo lwe-welding mesh luyilelwe ukusetyenziswa kwendawo yokuhlala. Yenziwe ngocingo lwentsimbi kunye nobubanzi becingo ukuya kwi-5mm emva kokutyabeka. Iingcingo zidibanisa kunye ukwenza umnatha we-75 × 150mm, ukudala isithintelo esomeleleyo nesomeleleyo. Iphaneli yonke enemigca imalunga ne-2.4m ukuphakama ine-4 engunxantathu egobile kuyo ephezulu ngokwaneleyo njengenkqubo yokubiyela izindlu.
PRO.FENCE unikezelo olu hlobo 3D egobileyo welding ucingo ucingo e umgubo electrostatic wawutyabeka ekhangeleka egudileyo ngaphezulu. Okanye ungakhetha PVC ukutyabeka ukugcina iindleko. Olu cingo locingo lusebenzisa iposti kunye nezibophelelo zokuhlanganisa ekulula ukugqiba.
Ngocingo olulungileyo lwezindlu zokuhlala.
Ucingo lweDia.: 5.0mm
Umnatha: 150 × 50mm
Iposti: iposti yesikwere
Isiseko: ibloko lekhonkrithi
Kugqityiwe: umgubo Electrostatic wawutyabeka / PVC wawutyabeka (Brown, Mnyama, Mhlophe njl)
1) Ubomi benkonzo ende
Yenziwe ngocingo oluphezulu lwentsimbi malunga ne-5mm ubukhulu kunye ne-electrostatic powder coating about 120g / m2. Amandla amandla aphezulu kunye nokuqinisekisa ukubola okuphezulu kwenkonzo ende.
2) Hlangana ngokulula
Inephaneli enemingxunya, iiposti kwaye zalungiswa ngokudibeneyo ngamasango. Isakhiwo esilula siya kunceda ukufakela ngokulula kwindawo.
Olu cingo luqinileyo lwentsimbi lunokudala umqobo okhuselekileyo kwipropathi yakho.
Into NO.: PRO-03 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo M-ezimilise Isefu welding enemingxuma Fence Kuba Izityalo Solar
Okulandelayo: I-358 yocingo oluphakamileyo locingo lokwenza isicelo seentolongo, ukwakha ucingo ngokhuseleko lwepropathi
M-ezimise Isefu welding enemingxuma Kucingo olubiyele (One-piec ...